ကြည်ကြည်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ: မ တို့ ပန်းရောင် ၀တ်ပါ။
Posted by ကြည်ကြည် at 3:03 AM
အပြုံးပန်း June 18, 2011 at 4:33 AM
ကိုယ်လည်း ပန်းရောင်တွေကို ဒီနှစ်တွေမှ ဂရုတစိုက် ၀တ်တတ်လာတယ်၊
pump လေးတွေကို အရင်ကစီးတယ်၊
ကောင်းမွန်ဝင်း June 18, 2011 at 4:42 AM
rose of sharon June 18, 2011 at 6:05 AM
အဲဒီခြေအိတ်လေးတွေကြိုက်ပေမဲ့ ဒီမှာရှားတော့ တခါတလေမှရတယ်.... ပန်းရောင်က သိပ်မကြိုက်ပေမဲ့ လှတာတော့အမှန်ဘဲနော်... :)
ပန်းရောင်ကမိန်းကလေးတွေကို လှစေတာတော.အမှန်ပါဘဲ။အထူးသဖြင်. ကလေးငယ်လေးတွေ(မိန်းကလး) တွေကို အသားမဲမဲဖြူဖြူ ဘယ်လိုအသားအရောင်ဖြစ်နေပါစေ၊ သမီးမိန်းကလေးငယ်ငယ်လေးတွေကို ဘေဘီပင်.ခ် လို ဂါဝန်အရောင်လေးတွေဝတ်ပေးခြင်းအားဖြင်. သမီးလေးတွေကိုပိုချစ်စရာကောင်းစေတာအမှန်ပါဘဲ။
အသက်ကြီးတဲ.အမျိုးသမီးတွေအတွက်မပြောလိုပေမယ်. ၊ကလေးငယ်လေးတွေ(မိန်းကလေးတွေ၊မွေးစမှ 10နှစ်ကျော်အထိ)အတွက်ကတော. ပန်းရောင်နုနုလေးတွေနဲ.အရမ်းလိုက်ဖက်ကြောင်းပါရှင်
သက်ဝေ June 18, 2011 at 9:29 AM
ငယ်ငယ်ကတော့ မေမေ့လက်ချက်နဲ့ ပန်းရောင်တွေ အများကြီး ဝတ်ဖူးတယ်... ဟိ..
နောက်ပိုင်း ကိုယ့်အဝတ် ကိုယ်ဝယ်ဝတ်တဲ့ အချိန်မှာတော့ ပန်းရောင်တွေ မဝယ်ဖြစ်တော့ဘူး... မှိုင်းပေ့ မှောင်ပေ့ မဲပေ့ဆိုတာတွေ ဝယ်ဖြစ်နေတယ်... ညီမပြောသလိုဆိုရင်တော့ ဆင်ခြင်မှပါလေ...း))
kyi kyi yay,
how did keep mint or rosemarry in your shoes. what kind of bags do you use, small paper bags ? how much leaves do you needabag. Thanks much for sharing tips.
ချစ်ကြည်အေး June 18, 2011 at 7:03 PM
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ခုတလော ပန်းရောင်တွေ ဝယ်ဖြစ်၊ ဝတ်ဖြစ်နေတယ် ညီမရေ...။ ပန်းနုတော့ မဟုတ်ဘူး ပန်းရင့်....:P
To anonymous : actually, I put more than 10 leaves inatea bag here in japan and also useanet which for food residual.
enjoy herb time ;)
သိင်္ဂါကျော် June 19, 2011 at 10:06 PM
ပန်းရောင်နုနုလေးတွေဆို အစကတည်းက ကြိုက်တာ.. :)
မိုးယံ June 20, 2011 at 11:46 AM
I start to put on pink:)I'll try your rosemary and mint tips.I usually put johnsson baby powder in my sons' shoes when they don't use them.I have box of mint at my balcony and many old leaves.Thanks for sharing.I prefer natural way.
စူးနွယ်လေး June 24, 2011 at 1:01 AM
တလောက အလုပ်ရှုပ်နေလို့ ခုမှလာနှုတ်ဆက်ရတယ် ကြည်ကြည်ရေ... တို့တော့ ခြေအိတ်မပါပဲ ဖိနပ်အစွပ်မစီးတတ်ဘူး။ ချွေးတွေတအားထွက်ပြီး စေးကပ်နေလို့ လမ်းလျှောက်လို့မရဘူး။ Ballerinas လေးတွေ pumps လေးတွေ စီးရင် ပါတယ်မထင်ရအောင်ပါးတဲ့အသားကပ်မျိုးရှာဝတ်တယ်။ အစကတော့ သည်လောက်ပူတာ အသားကပ်ဝတ်ရင် ကြည့်ခံရမှာစိုးလို့။ နောက်တော့ အဲလိုဝတ်တဲ့သူတွေလည်း ရှိတာ သိလာတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်တွေကတော့ မ၀တ်တာများတယ်။
rose June 26, 2011 at 5:31 AM
မကြည်ကြည်ရေ... tips လေးတွေ သေချာ ဖတ်သွားတယ်။ ဗဟုသုတ ရသွားလို့ ကျေးဇူးနော်။ ရို့စ်လည်း ပန်းရောင် နှစ်သက်ပေမယ့် အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတွေပဲ ပန်းရောင် ရှိတာ များတယ်။ အင်္ကျီ အ၀တ်အစားကျ ပန်းရောင်က တောက်တယ် ထင်လို့ မ၀တ်ရဲဘူး။ အရောင်မှိုင်းတွေပဲ ၀တ်တယ်။ အနက်ရောင် အကြိုက်ဆုံး ၀တ်ရတား)
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! June 27, 2011 at 12:49 PM
မမရေ ဗဟုသုတလေးတွေ အတွက် ကျေးဇူးပါလို့ ..
ညီမလေးက ပန်းရောင်ကို သဘောကျပေမယ့် သိပ်မသုံးဖြစ်ဘူး
အနီရောင်နဲ့ အနက်ရောင်ဆို အသဲမဲ ..နှစ်သက်ပြန်ရော..:)
သက်တန့်ချို June 30, 2011 at 4:21 AM
ဖိနပ်တွေကို အမှတ်တမဲ့ကြည့်လိုက်တာ ဘာကြီးတွေနဲ့တူနေမှန်းမသိဘူး သေချာကြည့်တော့မှ ဖိနစ်မှန်းမှန်းသိတယ် အစ်မကြည်ရေ :)
silvermelodylover July 31, 2013 at 3:02 AM
silvermelodylover July 31, 2013 at 3:05 AM